FAQs – Mahalaxmi Life Insurance
१) जीवन बीमा भनेको के हो ?
जीवन बीमा विमक (बीमा कम्पनी) र बीमित (पोलिसी होल्डर) वीच भएको कानुनी सम्झौता हो । यस अन्तर्गत तोकेको अवधि भित्र विमितको मृत्यू भएमा वा अंग भंग भएमा तोकेको रकम भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी गरीएको हुन्छ ।
२) बीमा कारोवारको प्रारम्भ कहाँ र कहिले भयो?
-११ औ शताब्दिमा इटलीबाट ।
३) नेपालमा बीमा कारोवार कहिलेबाट शुरु भयो ?
-	वि.स. २००४ साल बाट ।
४) नेपालको पहिलो बीमा कम्पनीको नाम के हो ?
-	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी । (निर्जीवन)
५) बीमा कम्पनी कति प्रकारको हुन्छ ?
-	क) जीवन बीमा ख) निर्जीवन बीमा ग) पूनर्बीमा
६) नेपालमा पहिलो जीवन बीमा कारोवार कहिलेबाट प्रारम्भ भयो ?
-	सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०२९ सालबाट ।
७) नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जीवन बीमा कम्पनी कुन हो ?
-	नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स – २०४४ सालमा कारोवार प्रारम्भ ।
८) नेपालमा अहिले कति वटा बीमा कम्पनीहरु संचालनमा छन ?
-	क) जीवन बीमा -१९ ख) निर्जीवन बीमा – २० ग ) पूनर बीमा -१
९) २०७४/०७५ मा कति वटा जीवन बीमा कम्पनीले कारोवार संचालन गरे ?
-९ वटा कम्पनीले कारोवार प्रारम्भ गरेका छन ।
१०) सबै भन्दा कान्छो र पछि संचालन भएको जीवन बीमा कम्पनी कुन हो र कहिलेबाट कारोबार संचालन गर्‍यो ?
- महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड – २०७५ माघ बाट ।
११) महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी कति हो ?
-रु. १४० करोड । सर्वसाधारणमा ६० करोडको शेयर निस्कासन पछि रु २०० करोड हुनेछ ।
१२) महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको हालको अध्यक्षको नाम के हो ?
-मनोरञ्जन रमण शर्मा
१३) बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स कसले प्रदान गर्छ ?
-	बीमा समितिले
१४) बीमा समिति कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ?
-अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ।
१५) बीमा समितिको मुख्य काम के हो ?
-	बीमा कम्पनीको इजाजत पत्र प्रदान गर्नु, नियमन गर्नु, निरिक्षण गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नै मुख्य काम हो ।
१६) जीवन बीमा कति प्रकारका हुन्छन ?
-	आजीवन, सावधिक र म्यादी
१७) सावधिक जीवन बीमा के लाई भनिन्छ ?
-	निश्चीत भूक्तानी अवधि तोकेर जोखिम बहन गर्ने गरी गरिएको बीमा संझौतालाई भनिन्छ ।
१८) आजीवन जीवन बीमा भनेको के हो ?
-	तोकिएको भुक्तानी अवधि सकिए पछि पनि जोखिम बहन गर्ने र कुनै पनि बेला मृत्यू पश्चात भुक्तानी दिने गरी गरिएको बीमा सम्झौता हो ।
१९) म्यादी जीवन बीमा भनेको के हो ?
-	निश्चित अवधि को लागि बीमा शुल्क लिई सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी गरिएको बीमा संझौता हो ।
२०) बीमा व्यावसाय कसरी संचालन हुन्छ ?
-	बीमा व्यवसाय अभिकर्ता ( एजेन्सी ) मार्फत हुन्छ ।अभिकर्ता, इजाजत प्राप्त आधिकारीक व्यक्ति हो जस्ले विमक र विमित वीच बीमा सम्झौता गराउने कार्य गर्दछ ।
२१) जीबन बीमामा एजेन्सी कति प्रकारका हुन्छन ?
-	कर्पोरेट एजेन्सी र व्यक्तिगत एजेन्सी (अभिकर्ता)
२२) व्यक्तिगत अभिकर्ता बन्न के चाहिन्छ ?
-	न्यूनतम SLC पासको सर्टीफिकेट, चारित्रीक प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रतिलिपी , रु ५००/- बीमा समिति दस्तुर र पासपोर्ट साइजको फोटो ।
२३) कर्पोरेट एजेन्सी बन्नको लागि के आवश्यक हुन्छ ?
-	सम्बन्धित कम्पनीको नियमावली र विनियमावलीमा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भई काम गर्न सक्ने व्यवस्था, संचालक समितिको निर्णय र कम्पनी सम्बन्धी कागजातहरु
२४) अभिकर्ताको इजाजत पत्र (लाईसेन्स) कसरी पाउँदछ ?
-	जीवन बीमा सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको व्यक्तिले बीमा कम्पनीको सिफारिसमा बीमा समितिमा निवेदन दिए पश्चात समिती ले इजाजत पत्र जारी गर्दछ ।
२५) अभिकर्ताको इजाजत पत्र कहीले नवीकरण गर्नुपर्दछ ?
- अभिकर्ताको इजाजत पत्र प्रत्यक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्दछ ।
२६) चैत्र मसान्त भित्र रू. २००, चैत्र मसान्त भित्र नविकर
- नगरेमा थप रू. १०० बिलम्ब शुल्क तिरी जेष्ठ मसान्त सम्म नवीकरण गर्न सकिनेछ , तत् पश्चात प्रति दिन थप रू. ५ तिरी आश्विन मसान्त सम्म नविकरण गर्न सकिनेछ ।
२७) प्रस्ताव( प्रपोजल) फारम भनेको के हो ?
-	बीमा गर्न चाहने व्यक्तिबाट व्यक्तिगत विवरण सहित लिन चाहेको बीमा योजना, बीमाङ्क रकम र अवधि लेखिएको प्रस्ताव फारम हो ।
२८) अण्डरराइटिङ भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	प्रस्तावकले दिएको निवेदनको आधारमा निजको जीवन बीमा योग्य छ छैन भन्ने निर्धारण गर्ने प्रकृयालाई अण्डरराइटिङ भनिन्छ ।
२९) बीमाको प्रस्ताब फारम भरे पछि बीमा कहिले देखि लागु हुन्छ ?
-	अण्डरराइटिङ भइसकेपछि तोके बमोजिम बीमा शुल्क कम्पनीमा प्राप्त भई प्रथम बीमा शुल्क रसिद जारी भएपछी ।
३०) नोमिनी( इच्छाइएको व्यक्ति) भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	प्रस्तावकको मृत्यू पछि भुक्तानी पाउने अख्तियारी प्राप्त भनि प्रस्ताव फारममा तोकिएको वा इच्छाइएको व्यक्तिलाई नोमिनि भनिन्छ ।
३१) Maturity period भन्नाले के जनाउँछ?
-	बीमाको भुक्तानी अवधि बुझिन्छ । बीमाको अवधि समाप्त भएको अवस्थालाई बुझिन्छ ।
३२) ADB भन्नाले के बुझिन्छ?
-	Accidental Death Benefit अर्थात दुर्घटना मृत्यू लाभ भनेर बुझिन्छ ।
३३) PTD या TPD ले के जनाउँछ?
-	Permanent Total Disable or Total Permanent Disable अर्थात स्थायी पूर्णत अशक्तताको अवस्था ।
३४) कुन अवस्थालाई PTD भएको मानिन्छ ?
-	दुर्घटनामा दुवै हात नभएको , दुवै खुट्टा नरहेको, एउटा हात र एउटा खुट्टा नरहेको र दुवै आँखा गुमाएको अवस्थाबाट दुवै अंग चल्न नसक्ने अवस्थालाई PTD भनिन्छ ।
३५) PWB भन्नाले के जनाउँछ?
-	Premium Weaver Benefit अर्थात बीमा शुल्क छुट लाभ भन्ने जनाउँछ ।
३६) PWB कस्तो अवस्थामा पाइन्छ?
-	विशेषत चाइल्ड पोलिसिमा प्रस्तावकको मृत्यू पछि वा कुनै विशेष प्रोडक्टमा प्रस्तावकको मृत्यू वा खास दुर्घटना पछि तिर्नु पर्ने बीमाशुल्क रकम तिर्नु नपर्ने सुविधा पाइन्छ ।
३७) MIB ले के बुझाउँछ?
-	Monthly Income Benefit अर्थात मासिक आय लाभ भन्ने बुझिन्छ ।
३८) Policy Service के हो?
-बीमा लेख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू जस्तै बीमा पूनर्जागरण विभिन्न किसिमको दावी भुक्तानी, कर्जा सुविधा प्रदान तथा बीमालेखमा आवश्यक परिवर्तन भन्ने बुभिन्छ ।
३९) बीमामा दावी कति प्रकारको हुन्छ ?
-क) मृत्यू दावी ख) अवधि समाप्ती दावी	ग) आंशीक अवधि समाप्ती दाबी
४०) मृत्यू दावी भन्नाले के बुझिन्छ ?
- काल गतिले वा दुर्घटनाको कारण बीमितको मृत्यु भएमा पोलिसीको शर्त अनुसार रकम भुक्तानीको लागि कम्पनीमा लिखित निवेदन दिने प्रकृयालाई मृत्यू दावी भनिन्छ ।
४१) मृत्यू दावीको लागि सामान्यत कस्तो कागज पेश गर्नु पर्छ ?
-क) काल गतिले मृत्यू भएमा स्थानिय निकायबाट मृत्यू दर्ता प्रमाणित पत्र, इच्छाइएको व्यक्तिसंग नाता प्रमाणित पत्र, हकवालाको नागरिकता र अस्पतालमा मृत्यू भएको भएमा मृत्यू प्रमाणापत्र पेश गर्नु पर्छ । - ख) दुर्घटनामा मृत्यू भएमा दावीको लागि प्रहरी मुचुल्का वा पोष्टमार्टम प्रतिवेदन, स्थानिय निकायको मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकता पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
४२) बीमालेख समर्पण ( Surrender) भन्नाले के बुझिन्छ ?
-कुनै पनी कारणले बीमालाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा बीमालेख बन्द गर्ने प्रकृयालाई।
४३) पोलिसी कर्जा कसरी पाइन्छ ?
-	बीमालेखमा तोकिएको अवधी पछि कुनै पनी बेला बीमितको अनुरोधमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म बीमालेख कर्जा सुविधा पाइन्छ ।
४४) बीमांकी (Actuary ) भनेको के हो ?
-	बीमा कम्पनीको सम्पत्ती र दायीत्वको मूल्याङ्कन गर्ने आधिकारीक व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ ।
४५) बीमांकिय मुल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	कम्पनीको सम्पत्ती र दायित्वलाई मुल्याङ्कन गर्ने प्रकृयालाई बुझिन्छ ।
४६) सोल्भेन्सी मार्जीन भनेको के हो ?
-	जीवन बीमा कम्पनीको उपलब्ध सम्पत्ती र आवश्यक सम्पत्तीको अनुपात भन्ने बुझिन्छ ।
४७) बीमांक (Sum assured) भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	बीमा गर्दा जोखिम बहन गरिने कुल रकम भन्ने बुझिन्छ ।
४८) विमक भनेको के हो ?
-	बीमा गर्ने जीवन बीमा कम्पनी भन्ने बुझिन्छ ।
४९) विमित भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	बीमा गर्ने व्यक्ती भन्ने बुझिन्छ ।
५०) चुक्ता मुल्य (Paid Up value) भनेको के हो ?
-	बीमा अवधी भित्र कुनै पनि समयको समानुपातीक बीमांक र उक्त बीमालेखले आर्जन गरेको बोनशको योग भन्ने बुझिन्छ ।
५१) बीमा शुल्क भनेको के हो ?
-बीमा गर्नको लागि तोके बमोजिम तिर्नु पर्ने किस्ता रकम ।
५२) Survival Benefit भन्नाले के बुझिन्छ?
-	अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमामा तोकीएको आंशिक अवधि समाप्त हुने समय सम्म विमित जीवीत रहेमा पाउने सुविधा ।
५३) अवधि समाप्ती भुक्तानी भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	बीमालेखको तोकिएको अवधि समाप्ती पछि बिमितले पाउने भुक्तानी ।
५४) Money Back पोलिसी भनेको के हो?
-	बीमा लेखको तोकिएको अवधिमा आंशिक भुक्तानी पाउने गरी गरिने बीमा योजना ।
५५) मोहलत अवधि (Grace Period) के हो ?
-	बीमा लेखको बीमा शुल्क तिर्ने दिन पश्चात थप अवधि । यो सामान्य तया ३० दिनको हुन्छ ।
५६) व्यतित बीमा लेख ( Laps Policy) भनेको के हो ?
-	कुनै पनि बीमालेखको बीमा शुल्क समयमा भुक्तानी नगरी मोहलत अवधि पनि व्यतित भै सकेपछि बीमालेख निस्कृय हुने अवस्थालाई जनाउछ ।
५७) व्यतित बीमा लेख कसरी पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ ?
व्यतित भएका बीमा लेखहरू बीमकले तोकेको निश्चित अवधि सम्म बीमाशुल्कमा बिलम्ब शुल्क भुक्तानी गरि पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ तत् पश्चात बिमितले बीमकको नियमानुसार आफु स्वस्थ भएको प्रमाण पेश गरि बिलम्ब शुल्क तिरि पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ ।
५८) बीमा जोखिम धारण नहुने अपवादको अवस्था के के हुन ?
-	दुई वर्षा भित्र आत्महत्या गरेमा, नागरिक तथा जङ्गि ऐन भंग गरी मृत्यु भएमा, आणविक भट्टी विस्फोटन बाट मृत्यू भएमा, नियमित उडान वाहेक चार्टर्ड उडानमा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा आदी ।
५९) महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कुन कम्पनी संग पूनर्वीमा सम्झौता गरेको छ ?
-	संसारको नम्बर वन पूनर्वीमा कम्पनी जर्मनीको ˝Munich Re˝ र नेपाल पूनर्वीमा कम्पनी संग ।
६०) पूनर्वीमा भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	कम्पनीले आफुले धारण गर्न सक्ने जेखिम भन्दा अधिक बीमाङ्क रकमको जोखिम अन्य कम्पनीबाट धारण गराउने प्रकृयालाई पूनर्बीमा भनिन्छ ।
६१) बीमा कारोवारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने ऐन कानुन कुन हो ?
-	बीमा एन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९
६२) बीमा पोलिसी बिक्रि गर्दा बीमा शुल्कको गणनाको आधार के के हुन ?
-	उमेर (Age) ,बीमा अवधि (Term), बीमाङ्क ( Sum Assured), भुक्तानी तरीका (Mode of Payment), बीमा योजना(Plan) र थप सुविधाहरु (Rider Benefit) नै गणनाका आधार हुन ।
६३) बैकान्स्योरेन्स भन्नाले के बुझिन्छ ?
-	बैकको ग्राहकलाई मात्र लक्षित गरी बीमा कम्पनीले ल्याएको बीमा योजना जुन बैकमार्फत मात्र बिक्रि गर्छ त्यसलाई बैकान्स्योरेन्स भनिन्छ । बैक र बीमा कम्पनी वीच भइरहेको हालको सम्झौता कर्पोरेट एजेन्सी एग्रिमेन्ट हो ।